इमेज साप्ताहिक : 2012-01-29
सरकारी जग्गा कब्जा गरि बसेका पहिरो पिडितलाई प्रहरीले हटायो
नुवाकोट माघ २१ गते । विदुर नगरपालिका–६ महारानी डिही स्थित चण्डीपोखरीमा रहेको खम्पाली क्याम्पको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसोवास थालेका तीन सय भन्दा बढीलाई प्रहरीले आज दिउँसो हटाएको छ ।
जग्गा कब्जा गरेर बसेका पहिरो पिडितहरु प्रहरीले हटाउनु अघि ।
तस्बिर ः कपिलदेव खनाल
नुवाकोटको किम्ताङ गाउँ विकास समितिका पहिरो पिडितहरुले शुक्रवाररातीबाट उक्त जग्गामा बसोवास थालेका थिए । सरकारी सम्पत्ती गैह्र कानुनी रुपमा कब्जा गरेकोमा तत्काल हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निदैृशन दिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई हटाएको हो । नुवाकोट जिल्लाका किम्ताङ गाविसमा १९ वर्ष देखि लागेको पहिरोको कारण बसोवास असुरक्षित भउका तीन सय भन्दा बढी परिवार सरकारी जग्गा कब्जा गरि बसेका थिए ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष पौडेलका अनुसार यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिनु कानून विपरित रहेको र उनीहरुको समस्या प्रति प्रशासन गम्भिर रहेको भन्दै छलफलको लागी आग्रह गरिएको छ ।
आफुहरुलाई सरकारले पहिरोबाट मुक्ती दिन सुरक्षित स्थानमा सार्ने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारी जग्गामा कब्जा गरेका थिए । उक्त जग्गा गाउँलेहरुले आफ्नो कब्जामा रहेको बताएपछि किम्ताङ गाविस नै खाली हुनेगरी बसोवासको लागी आउने क्रम सुरु भएको थियो । किम्ताङ गाविसका पुर्व अध्यक्ष सञ्जयबहादुर तामाङका अनुसार सरकारलाई दवाव दिनको लागी सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको हो । सरकारले आफुहरुलाई उपर्युक्त स्थानमा बसोवासको लागी अनुमती नदिएसम्म सरकारी जमिन कब्जा गर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
गाउँलेहरुले बसोवास गर्न थालेका उक्त जग्गा काठमाडौँको सुन्दरीजल स्थित केन्द्रिय कारागार सार्नका लागी प्रस्ताव गरिएको स्थान हो । त्यसका लागी एक टोलीले गएको दुई साता अघि अध्यायन भ्रमण समेत गरेर फर्किसकेको छ ।
नुवाकोट जिल्लाको दुर्गम मानिएको गाविस किम्ताङ्गका वासिन्दाहरू १९ वर्ष देखि गाउँमा गइरहेको पहिरोका कारण त्रसित छन् । २०४९ सालबाट गाउँको वस्ती पुछारमा जान थालेको पहिरो २०५७ सालबाट वस्तीमा पुगेपछि उक्त गाउँका सर्वसाधारणहरू त्रासमा छन् ।‘हामी कहाँ सुख्खायाममा पनि पहिरो जाने गरेको छ, पहिरो बस्ती पसेको छ’ तामाङले भन्नुभयो ।
पहिरो पिडितहरूलाई उपयुक्त स्थानमा बसोवास गराउन र पहिरो रोकथाम गर्न तत्कालिन समयमा जिल्ला भु–संरक्षण कार्यालय नुवाकोटका अधिकृतको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तह नै नदेखेर दराजमा थन्किएको पिडितहरुको भनाई रहेको छ ।
सरकारी निकायले आवश्यक कदम नचाले पछि २०५८ सालमा उक्त गाविसका पुर्व अध्यक्ष सञ्जयबहादुर तामाङको नेतृत्वमा पहिरो पिडितहरू लाई बसोवासको ग्यारेष्टी गरेर पुर्नस्थापनाको लागि पिडितहरूबाट रकम समेत उठाइएको थियो । त्यसबेला जनही पाँच हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म गाउँलेहरूसंग संकलन गरेको वजेट तामाङले मासेको गाउँलेको भनाई । ‘सुरक्षित स्थानमा बस्ने भनेर २० हजार रुपैयाँ बुझाएँ, अहिलेसम्म पहिरोमाथीको बास भएको छ हाम्रो त’ एक पिडितले दुःख पोख्दै भने । पहिरो पिडितहरूलाई उक्त रकमले मकवानपुर जिल्लामा पुर्नस्थापना गर्ने भनिएता पनि सफल हुन नसकेको भन्दै पुर्व अध्यक्ष तामाङकै नेतृत्वमा २०५९ सालमा रौतहट जिल्ला कर्मैया गाविसको बागमती किनारमा जग्गा समेतको छनोट गरि जंगल फडानी भएको थियो । पुर्नवासको लागि स्थान समेत छनोट हुँदा पनि पिडितहरू वसाइँ सर्न नपाउनुमा तामाङ दोषि रहेको गाउँलेहरूको भनाई छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा प्रधानमन्त्री वाढीपिडीत राहत कोषबाट प्राप्त भएको तीन लाख रुपैयाँले उक्त गाउँको पहिरो रोक्न भनि भु–संरक्षण कार्यालयले बाँस रोपेको थियो । तर उक्त बाँसले पहिरो रोक्ने छाँट नदेखिएको स्थानिय रामबहादुर तामाङ बताउँनुहुन्छ ।
नुवाकोटको किम्ताङमा गाविसनै बगाउने गरि गएको सुख्खा पहिरो ।
तस्बिर ः कपिलदेव
गाउँलेले कब्जा गरेको उक्त जग्गा सरकारले ३९ बर्ष अघि खम्पा बिद्रोहीहरूको पुर्न बासको लागि अधिकरण गरेको थियो । २०२९ सालमा तिब्वतलाई चीनबाट स्वतन्त्र गराउने उद्देश्यले मुस्ताङ जिल्लामा बिद्रोह सुरु गरेका खम्पा जातीका मानिसहरूलाई तत्कालिन नेपाल सरकारले नुवाकोटको जिल्लाको बिदुर नगरपालिका–६ महारानी डिही स्थित चण्डीपोखरीमा बसाएको थियो । त्यस क्षेत्रको आँठ सय ३४ रोपनी जग्गा अधिकरण गरि पुर्न बासको व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो । उनीहरूले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि बसोवासको लागि काठमाडौँ भासिसकेका छन् । त्यस पछि उक्त जमिन प्रयोग विहिन बन्दै आएको छ ।
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Saturday, February 04, 2012 No comments:
विद्यालयलाई जग्गा र भवन
नुवाकोट, १७ माघ । नुवाकोट जिल्लाको नर्जामण्डप गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ मोरिया स्थित दुधेदेवी प्राथमिक विद्यालयलाई जग्गा र सहित एक समाजसेवीले तीन कोठे पक्की भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका छन् ।
वडा नं. ५ बाट पुर्व जनप्रतिनिधि समेत भएका स्थानीय समाजसेवी हर्कमान श्रेष्ठले विद्यालयको लागी जग्गा र तीन लाख रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले विद्यालयको भौतिक सुधारको लागी गरेको उक्त कार्यले विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई पठनपाठनमा सहयोग पुगेको बताइएको छ ।
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Tuesday, January 31, 2012 No comments:
नेपालमा निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाई जारी ः नेता पौडेल
नुवाकोट, १६ माघ । नेपाली काँग्रेसका उप सभापति एवं संसदिय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा अझै पनि निरङ्कुशता र लोकतन्त्रबीच लडाई जारी रहेको बताएका छन् ।
राजा महेन्द्रदेखि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसम्मको कित्ता एउटै भएको र त्यसका बिरुद्ध काँग्रेस लडिरहेको उनले बताए । आज सोमवार नेपाली काँग्रेस नुवाकोटको दोश्रो जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उप सभापति पौडेलले माओवादीले जर्वजस्ती कब्जा गरेको सम्पत्तीलाई सरकारको तर्फबाट बैधानिकता दिने र सूचनाको हकलाई कुण्ठित पारेर अधिनायकवाद लाध्न खोज्ने पुर्व आभाष भएको बताए ।
माओवादीले सत्ता कब्जा गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिककको मौलिक अधिकार कुण्ठित पार्ने लक्षण देखाइसकेको उनको भनाई रहेको छ । सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने सरकारी निर्णयका विरोधमा नेपाली काँग्रेसले सदनमा कडा प्रतिरोघ गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए । उक्त सूचनाको हक विरोधी निर्णयबाट वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकोको चरित्र उदाङ्गो भएको पौडेलले बताए । राष्ट्रबादको आर्दश कुरा गरेर राष्ट्रको सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने गरी माओवादी र उक्त पार्टीका नेताहरुले प्रस्तुत गर्ने अभिव्यक्तिहरु विरोधाभाषपूर्ण भएको उनको भनाई छ ।
कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बर्तमान सरकारले सूचनाको हकमा बन्देज लगाएर सबै भन्दा ठूलो लोकतन्त्र विरोधी कार्य गरेको बताए । जनसत्ताका नाममा कब्जा गरिएका सम्पत्तीलाई बैधानिकता दिने, सूचनाको हक कुण्ठित पार्नेजस्ता क्रियाकलाप शान्ति र संविधानको विरुद्ध भएको बताउँदै उनले माओवादी नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको बताए । केसीले राष्ट्रिय सहमतीको वातावरण सृजना गरेर काँग्रेसले अब नयाँ मोर्चा तयार गर्ने बताए । माओवादी सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै केसीले काँग्रेसले त्यसलाई निस्तेज पार्न लाग्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका अर्का केन्द्रिय सदस्य डा. रामशरण महतले नेपालले छ भन्दा बढी प्रान्त थेग्न नसक्ने बताए । राज्य पुर्नसंरचनाको विषयलाई बहुमतको आधारमा टुङ्गो लगाउने चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्दै सहमतीको आधारमा नभई बहुमतका आधारमा राज्य पुर्नसंरचना गरिए काँग्रेसले त्यसलाई सिधै अस्विकार गर्ने बताए । शान्ति र संविधानको मुख्य बाधक एकीकृत माओवादी मात्रै रहेको उनको आरोप छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, मिन विश्वकर्मा, सभासद् लक्ष्मी परियार, सभासद् तथा नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी, महासमिति सदस्यहरु ध्रुव अधिकारी, बहादुरसिंह लामा, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य शिव देवकोटालगायतकाले मन्तब्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कलाकारहरुले साँस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मिस नुवाकोट कामना श्रेष्ठ, मिस्टर नुवाकोट सुमन थापा, नेपाली काँग्रेस गाउँखर्क, बेलकोट गाउँ इकाईलाई कार्य सम्पादनमा राम्रो भन्दै सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाका काँग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई केन्द्रिय नेताहरुले प्रशिक्षण समेत दिनुभएको थियो ।
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Monday, January 30, 2012 No comments:
चार कक्षा पछि चार कक्षा
तीन वर्ष देखि कक्षा चारमा पढिरहेका राममाया र सुनिता
तस्बिर : कपिलदेव
विदुर\_तस्बिरमा देखिएका घ्याङ्फेदी गाविसका यी राममाया तामाङ(बायाँ) र सुनिता मोक्तान(दायाँ)ले कक्षा चार दुई पटक उत्र्तिण गरिसके । सामान्यतया कक्षा चार पछि यिनीहरूले कक्षा पाँच पढ्न पाउनुपर्ने हो, तर तेश्रो पटक पनि कक्षा चारमा नै भर्ना भएका छन् । घ्याङ्फेदी गाविसमा यिनीहरू मात्रै होइन कक्षा चारमै विद्यार्थी जीवन विताउनेहरू १३ जना छन् ।
गाउँमा उपलब्ध हुननसकेको विद्यलायका कारण वर्षेनी कक्षा उत्र्तिण भएर एउटै कक्षामा पढ्नु पर्ने उनीहरूलाई बाध्यता बनेको छ । विद्यालय नगए मेलापात जानुपर्ने र आफन्त तथा महिला विक्रीका दलालहरूले फकाएर बिक्री गर्ने त्रासकै कारण आफुहरू कक्षा दोहो¥याएर भएपनि पढ्ने गरेको राममाया तामाङ र सुनिता तामाङको भनाई छ । कक्षा चारमा कति वर्ष पढ्ने त ? ‘ठूलो नभएसम्म’ उनीहरूको उत्तर छ । तर तीन वर्षसम्म एउटै कक्षामा पढिरहेको उनीहरूलाई अभिभावकले अब विद्यलाय छुटाउने मनस्थिती बनाएका छन् । ‘सधै एउटै क्लासमा पढ््नु भन्दा घरको काम गर्नु नै राम्रो’ काले तामाङले भने ।
गाविस भरिमै कक्षा चार भन्दा बढी नपाई नहुने भएकोले समस्या आएको हो । ३० वर्ष अघि स्थापना भएको घ्याङ्फेदी प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा चारसम्म पढाई हुनेगरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटले कक्षा तीनसम्म स्विकृत दिएको उक्त विद्यलायमा शिक्षक र अभिभावकहरूको बलबाटै कक्षा चारसम्म पठनपाठन हुँदै आएको छ । गाउँमा त्यो भन्दा बढी पढ्नका लागी विद्यालयहरूमा कक्षाको व्यवस्था नभएको र स्थानीय अभिभावकहरूले बाहिर राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने अवस्थाका कारण पढ्न चाहनेहरू वर्षैसम्म कक्षा चार दोहो¥याउने गरेका छन् ।
‘यहाँका अभिभावकले छिमेकी गाउँमा या सहरमा राखेर आफ्ना बाबुनानीलाई पठाउन सक्ने आर्थिक अवस्था छैन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर मोक्तान भन्छन्– पढाई छुटाउनुभन्दा त पढाइरहनु नै राम्रो भनेर एउटै कक्षामा भएपनि भर्ना गर्ने गरेका छन् ।’
गाविसमा उच्च कक्षा (चार) सम्म सञ्चालन गर्दै आएको उक्त विद्यालय पनि समस्यामा छ । कुनै समय कक्षा पाँचसम्म पढाई हुने विद्यालयमा क्रमश कक्षाहरू घट्दै जाँदा तीनसम्म आइपुगेको छ । शिक्षा कार्यालयले गर्ने अव्यवहारिक निर्णय र अभिभावकका कम चासोका कारण विद्यालयको कक्षा क्रमश घट्दै आएको बताइन्छ । सोही विद्यलायलबाट २०४२ सालमा कक्षा पाँचसम्म उत्र्तिण गर्नेहरू पनि गाउँमा छन् ।
त्यसो त २३ वर्ष देखि अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गर्दै आएका मणिराम भण्डारी प्रधानाध्यापक छन् । निजी श्रोतबाट दुई जना शिक्षक र अस्थायी एक जना शिक्षक रहेको उक्त विद्यालय आफ्नै उठिवासको खतरामा उभिएको छ । विद्यालय नभएको कारण विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरू घ्याङ्फेदी गाविसमा ९५ प्रतिशत बालबालिका छन् । गाउँमा भएकै विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरू पठनपाठनका लागि नआउने गरेको शिक्षकहरूको भनाई रहेको छ । घ्याङ्फेदी प्राविका प्रधानाध्यापक मणिराम भण्डारी अभिभावकमा चेतना नभएको कारण यस्तो समस्या सृजना भएको बताउछन् ।
यता, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोट यो विषयमा बेखबर रहेको छ । विद्यालय निरिक्षक देविराम आचार्य गाउँमा विद्यार्थी नआउने समस्या र अभिभावकमा पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना अभावका कारण शिक्षा कार्यालयले प्रावि तहसम्मको विद्यालय स्थापना नगरेको बताउँछन् ।
नुवाकोट जिल्लामा चार वर्षको अवधिमा शिक्षाको विकासका लागि सरकारले एक अर्व ७० करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको शिक्षाको रेकर्डले देखाउँछ । तर कक्षा पाँचसम्म पनि नढ्न नपाउने घ्याङ्फेदीका बालकालिकाहरू विद्यालय समसयमा घाँस दाउरा गर्न बनजङ्गल जाने गरेको भेटिन्छन् ।
अशिक्षाको प्रभाव घ्याङ्फेदी गाविसमा प्रत्यक्ष रुपमा मानव बेचविखनसँग गाँसिएको छ । अभिभावकहरूले भोग्दै आएको गरिवी र बालिकाहरूमा नभएको शिक्षाले गर्दा गाविसका प्रायः बालिकाहरू भारतका यौन बजारमा पुग्ने गरेका छन्, त्यो पनि अभिभावकहरू कै सम्लग्नतामा ।
उत्र्तिण भएर पनि कक्षा बढ्न नपाएका केही विद्यार्थीहरूले त विद्यालय जान समेत छाडेका छन् । विद्यालय परिसरमा घाँसको डोको बोकेर उभिएका अनिता तामाङलाई उनका अभिभावकले घाँस काट्नको लागी बारीमा लैजादै थिए । ‘सबै कक्षा पास भइसक्यो, अब स्कुल किन पठाउने र ?’ अनिताको बाबु काले तामाङले भने । नियमित विद्यालय पुगेर जत्तिनै पढेपनि चार भन्दा माथी पढ्न नपाइने भएकोले सुर्फदमा पढ्दै गर्दा हुने उनको बुझाई छ ।
कक्षा चार देखि माथी पढ्न रहर गर्ने घ्याङ्फेदी गाविसका विद्यार्थीहरू छिमेकी गाविस शिखरवेशी, समुन्द्रटार या सदरमुकाम पस्नुको विकल्प नै छैन । ‘बाहिर लगेर हामीले कसरी पढाई खर्च जुटाउन सक्छौ र ? नेगीखोलाका कमानसिंह तामाङले भने– गाउँमा भएको विद्यालयमा छोराछोरीलाई पठाएकै हो नी ।’
घ्याङ्फदी गाविसमा हाल सात वटा विद्यालय छन् । कक्षा दुई देखि चारसम्म पढाई हुने ति विद्यालयहरू मध्ये कतिपयको रेडर्क समेत छैन शिक्षा कार्यालयमा । अभिभावकले गाविस तथा अन्य श्रोतबाट जुटाएको रकमबाट विद्यालयका भवन त ठडिएका छन् । त्यसका लागी शिक्षक तथा अन्य शौक्षिक सामाग्री नभएकै कारण विद्यालयको रुप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
यता, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले माध्यामिक विद्यालय नभएका विद्यालयहरूमा कमसेकम एउटै भएपछि मावि सञ्चालन गर्ने हल्ला तीन वर्ष देखि गरिरहेको छ ।
शिक्षक नजाने विद्यालय
नेगीखोलामा रहेको विद्यालय जो सधै बन्दहुन्छ ।
तस्बिर : जगदीश खनाल
जिल्लाको विकट गाउँ घ्याङ्फेदीमा रहेको इन्द्रायणी प्राथमिक विद्यालय महिनौँ देखि शिक्षक पर्खिरहेको छ । दुई जना शिक्षक दरवन्दी रहेको उक्त विद्यालयमा कहिलेकाहीँ मात्र शिक्षक झुल्कने गरेका छन् । दुई शिक्षकले आफ्नै निजी खर्चमा केही पारिश्रमिक दिने गरी राखिएको पिएनले सम्हाल्ने गरेको विद्यालयमा विद्यार्थी आउन छाडेका छन् । स्थानीय अभिभावकहरूका अनुसार उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद उप्रेती तीन वर्ष अघि गाउँबाट हिडेकोमा आजसम्म विद्यालय फर्किएका छैनन् । उनी सदरमुकाम र घरमा नै बसेर तलब खाएको अभिभावकको आरोप छ ।
संयोग नौ मान्नुपर्छ, समाचार सङ्कलनका क्रममा हामी गाउँ रहेका बेला त्यस विद्यालयका शिक्षक रामकृष्ण श्रेष्ठ पुगेका थिए । उनी चाँही तीन÷चार महिनामा दुई÷चार दिन विद्यालयमा सयम खर्चिना भ्याउदा रहेछन् । गाउँमा १३ वर्षदेखि चलेको व्यथितीको विरुद्ध यसपाली अभिभावकहरूले आँटै गरेर शिक्षकसंग दोहोरो वात गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालय नआएर घरमै बसेर तलब खाने शिक्षकहरूको प्रवृत्तिले आफुहरू आक्रोशित भएको बताए । विद्यालयमा यसरी भइरहेको अनियमितताको विषयमा शिक्षा कार्यालयले नदिएको ध्यान प्रति अभिभावकको गुनासो छ । ‘हामी ठूलो हेपाईमा परेका छौँ, शिक्षक गाउँ आउँदैनन्’ सीताराम तामाङले भने । शिक्षा कार्यालयमा एक साल अघि यही विषयमा उजुरी गर्न अभिभावकहरू पुगेता पनि शिक्षकहरूले टेरपुछर नलगाएको र शिक्षा कार्यालयले शिक्षहरूलाई गाउँमा धपाउन नसकेको उनको भनाई रहेको छ ।
लेकमा रहेको उक्त गाउँ आवात जावातमा समस्या छ । अनपढ अभिभावक र दुर्गमको फाइदा उठाएर सरकारी जागिर खाइरहेका शिक्षकको हेपाहापना थामिएको छैन । घ्याङफेदी–६ स्थित सिसिपुका ६० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू शिक्षक अभावमा मेलापात र गोठालोमा अभ्यस्त बनिसकेका छन् । शिक्षक श्रेष्ठका अनुसार विद्यालयको हाजिरी कापीमा भने ४२ जना विद्यार्थीको नामावली रहेको छ । उक्त विद्यालय २०३२ सालमा स्थापना भएको हो ।
शिखरवेशी गाविसको मानेडाँडामा रहेको शिखरवेशी प्राथमिक विद्यलायमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच भाषाको समस्या देखिएको छ ।
विद्यालयमा रहेको तीनै जना शिक्षक मधेशी मुलका र विद्यार्थीहरू तामाङ समुदायका भएकोले भाषिक समस्या सृजना भएको हो ।
उसै त औसी पुर्णिमामा खुल्ने विद्यालय त्यसमा पनि भाषिक अन्तर सृजना भएपछि विद्यालयबाट बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । कक्षा ५ सम्म पढाई हुने उक्त विद्यालयमा शिखरवेशी गाविसका ४,५,७,८ र ९ नम्वर वडाका वालवालिकाहरू पढ्दै आएका छन् । उक्त विद्यालयमा सर्लाही चन्द्रनगरका दुई जना र सप्तरीका एक जना गरी तीन शिक्षक १२ वर्ष देखि कार्यरत छन् ।
उनीहरूको विद्यलायमा रहने अत्याधिक अनुपस्थितीका कारण त्यहाँ पनि विद्यालयको बन्द ढोका हेर्दै फर्कनु पर्ने अवस्था विद्यार्थीहरूमा रहेको अभिभावक बताउँछन् । ‘मास्टरहरू कहिलेकाहि आउने हुन्, त्यही पनि उनीहरूले बोलेको बुझ्दैनन् हाम्रा केटाकेटीहरूले’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सन्तमान तामाङले भने ।
घाँस दाउरा गर्न डोको बोकेर हिडेका अनिता तामाङ विद्यालय अगाडी ।
घ्याङ्फेदी र शिखरवेशीमा भेटिएको यी प्रतिनिधि विद्यालयले देखाएको छ, समग्र जिल्लाको शैक्षिक अवस्था । वितेको चारवर्षको अवधिमा डेढ अर्व भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा खर्चेको बताउने शिक्षा कार्यालय अर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा नुवाकोट जिल्लामा शिक्षाका लागी १७ करोड ६३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै छ ।
उक्त रकम जिल्लाको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गरिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाका विद्यालयहरूको भौतिक सुविद्या विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सय ३८ विद्यालयका लागी भवन तथा अन्य भैतिक पुर्वाधार विकासको लागी खर्च हुने जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रेमनाथ पौडेलले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटले भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा साधारण तर्फका ५२ र सामुदायिक व्यवस्थापनतर्फ ४० नयाँ कक्षाकोठा निर्माण हुने बताइएको छ ।
अनौपचारिक शिक्षा तथा महिला साक्षरता कक्षा सञ्चालन र आय आर्जन कार्यक्रममा २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सरकारले शिक्षा कार्यालय मार्फत माध्यामिक तहको एक खुला विद्यालयका लागी एक लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
शिक्षकमा महिला आवेदक बढी
स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र (शिक्षक लाइसेन्स)को परीक्षका लागी नुवाकोट जिल्लामा आवेदन दिनेमा महिलाहरू अत्याधिक रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुमती पत्रका लागी दुई हजार निवेदन प्राप्त भएकोमा महिलाहरू ७० प्रतिशत रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नुवाकोटले जनाएको छ । शिक्षा कार्यालयका अनुसार निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहको अनुमती पत्र लिनका लागी यो पटक मात्रै दुई हजार जना भन्दाबढीले दरखास्त दिएका छन् ।
शिक्षक लाइसेन्स नपाई विद्यलायहरूमा उध्यापन गर्न नपाइने र शिक्षाशास्त्र अध्याय गरेका र १० महिने शिक्षक तालिम लिएका व्यक्तिहरूले मात्र शिक्षक लाईसेन्स पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, January 29, 2012 No comments:
तस्कर र उपभोक्ताको पञ्जामा बन, सिल गरिएको काठ पनि चोरी
रसुवा÷रसुवाको डाडाँगाउको बन सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरूले फडानी गरेका स्थानीयहरूको आरोप छ ।
सामुदायिक बन जोगाउन बनेको उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरू नै मिलेर बन फडानी गरे पछि कसले के गर्नेनै सक्छन र ! बन जोगाउन बनेको उपभोक्त समिति नै तस्करहरूसँग मिलेर खुलेआम काठ तस्करी हुदाँ यहाँको बन कुनै पनि बेला उजाड बन्न सक्ने देखिन्छ ।
सामुदायको बन जोगाउन बसेका उपभोक्ता समिति रक्षक हुनु पर्ने हो तर उनीहरूनै भक्षक बने पछि यहाँका स्थानीयले जिल्ला बन कार्यालय रसुवामा उजुरी दर्ता गरेका थिए । तर जिल्ला बन कार्यालय रसुवाले दुई बर्ष अघि मात्र नुवाकोटको बन कार्यालयलाई बन फडानीको निरिक्षणको जिम्मा दिए पछि नुवाकोटबाट खटिएका बनका कर्मचारीले सामुदायिक बनले बन फडानी गरेर टिप्पणी उठाएको केही समय नै बित्न नपाउँदै बन तस्करहरूले २०६६ सालमा बन निरिक्षण गरेर फर्केने क्रममा बिचबाटोमा नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला बन कार्यालय नुवाकोटको गाडीमा आगजानी गर्नुको साथै टिप्पणी उठाएको कागजपत्र समेत जलाईदिएका थिए ।
बन जोगाउन बसेका सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति मार्फत यहाँका स्थानीयले आबाज उठाएको केही समय त बन फडानी रोकिएको थियो । तर केही महिना अघिबाट पुन तस्करहरूले डाडागाउँको बन फडानी थालेका छन् । बन फडानी थालेपछि जिल्ला बन कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बनको निरिक्षण गरि काटिएको काठमा टाँचा लगाएर गए पनि रातको समयमा काठ तस्करी हुने गरेको यहाँका स्थानीय डिन्डुप तामाङ बताउँछन् ।
‘रातको समयमा गाउँमा गाडी आउँछन् र काठ लोड गरेर अहिले पनि लैजाने गरिएको छ तर सम्बन्धीत निकाय कानमा तेल हालेर बस्दा यो अबस्था आएको हो’ उनले भने । बन फडानी गर्ने तस्करलाई जिल्ला बन कार्यालय रसुवाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसक्दा यहाँका बन बिस्तारै सखाप हँुदै छ ।
डाडागाउँको मैलुङ क्षेत्रमा करिब ५० हेक्टर क्षेत्र फलमा फैलिएको बनको संरक्षणमा भन्दा बन फडानी कसरी गर्ने सकिन्छ भन्नेमा यहाँको तस्करहरू लागिपरेका छन् । बन फडानी र तस्करी गर्ने बिरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने सकिने भए पनि यहाँको बन कार्यालयले तस्करलाई समाएर कठघरामा आहिले सम्म उभ्याउन सकिरहेको छैन ।
सामुदायिक बनको कुनै पनि रुख काटिदाँ स्थानीयलाई एक हजार देखि पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना लगाउने यहाँको बन उपभोक्ताको मिलेमतोमा बन फडानी हुदाँ समेत कारबाही हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ । ‘हामीलाई रुख काट्दा स्याउला काट्दा जरिवाना लिन्छन् तर उनीहरूनै तस्करहरू सँग मिलेर बन सखाप हुदाँ समेत कुनै कारबाही हुन सकेन’ स्थानीयहरूले भने ।
यहाँको सामुदायिक बनमा लोपोन्मुख जातका काठ पनि काटिएको छ । चाप, साल जस्ता लोपोन्मुख काठहरू फडानी भएका छन् । तर सम्बन्धीत निकाय मौन बस्दा यहाँको बन कुनै पनि बेला उजाड पनि बन्न सक्नेछ । यस बिषयमा रसुवाको जिल्ला बन कार्यालय स्थानीय प्रशासनले बेलैमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । लोपोन्मुख जातका रुखहरू काटिनु गैरकानुनी भएको र यसले बाताबरणीय सन्तुलनमा समस्या हुने र बन संरक्षणमा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको सामुदायिक बन उपभोक्ता माहासंघ रसुवाका अध्यक्ष बिनोद पौडेलले बताउछन् । तस्करहरूले बेलुकाको समयमा गाडीमा लोड गरेर रातारात लाने भएका कारण नै यहाँको कति रुख काटियो स्थानीय रामं्रो सँग भन्न सकिरहेका छ्रैनन् । मैलुङ जलबिद्युत आयोजनाले र त्रिशुली ३ ए निर्माणको सामान ओसार÷पसार गर्नेका लागी बिद्युत कम्पनीले बनाएको सडक बाटो अहिले काठ तस्करीका लागी सजिलो बनेको छ ।
सरकारी जग्गा कब्जा गरि बसेका पहिरो पिडितलाई प्रहरी...
नेपालमा निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाई जारी ः नेता ...
तस्कर र उपभोक्ताको पञ्जामा बन, सिल गरिएको काठ पनि ...